Vinyl zamapulangwe ivamile phakathi abathengi. Lokhu idumela kahle okufanele, ngoba sekugcineni uphelele ulwelwesi izakhiwo, ebavikela ezintweni ezingezinhle futhi wanikela ukudayiswa ezihlukahlukene imibala nosayizi. Emakethe zamapulangwe namuhla imelelwa abakhiqizi abaningi, kodwa abathengi unesithakazelo umphakeli hhayi kuphela, kodwa futhi ubukhulu aliqede. Lokhu kuzoxoxwa ngakho ngezansi.
Siding, ogama obuphelele kungase kushintshwe nguwe, kuye kwemigomo endlini, kungase kudingeke linani lelehlukile amagagasi herringbone libizwa ifomu factor. Ukuvakashela esitolo, uzothola imikhiqizo nge herringbone olulodwa, kabili futhi kathathu. Ngamunye wabo isiqu sawo ngendlela izinhlamvu:
Ngemva lolu phawu kukhona izinombolo ukuthi ukuchaza ububanzi. Ngokwesibonelo, D 4.5 wokugubha siyobonisa ukuthi ngaphambi - iphaneli nge double herringbone iphethini, ukushuba we wave okuyinto 4.5 amayintshi, okuyinto cishe elilingana 114,3 mm. Lokhu kubonisa ukuthi ububanzi ingqikithi iphaneli ilingana 228,6 mm. Uma unquma ukuthenga zamapulangwe, lungisa ubude kufanele futhi kuyo. Kuhle kokusho ukuthi azikho osayizi ejwayelekile, igridi ngamunye kuyahlukahluka umkhiqizi.
Iphaneli angakuthola budze lobehlukene, zingabantu uhla 2.5 kuya kwezingu-4 m. Ngokuphathelene ukushuba we ishidi, kungase elilingana okungenani 0.7 mm. Inani obuyisilinganiselo 1.2 mm. Ngokuthenga ithikithi zamapulangwe, ubude baso oyosisiza izintandokazi zakho, kufanele sinake futhi ububanzi umkhiqizo, kungaba isukela 20 kuya ku-30 cm.
Ubukhulu we zamapulangwe metal
Ukudayiswa kungabonwa ngaphezulu nensimbi zamapulangwe, okuyinto has a ukuqina esithé ukuphakama. Nokho, lokho kuyobe babe nemibi, enye yazo sivezwe kula ezifweni ukugqwala panel. Nokho, uma unquma ukuthenga sekugcineni, kufanele uzijwayeze lingakanani. Metal zamapulangwe, ogama ubude 4000 mm, kungase kube ukushuba metal 0,48-0,61 mm.
Kubalulekile ukwazi okwengeziwe futhi wonke, kuleli cala zokhahlamba kusuka 200 kuya ku-250 mm. Isisindo eyodwa square imitha yokuqedela kuhluka 2.4 kuya 3.5 kg. Ngokuthenga ulwelwesi metal, ungakwazi ukuthenga panel eziningi ngendlela ofuna ngayo. Kuyinto elula kakhulu uma umsebenzi ubhekene nenkinga uma akwanele imikhiqizo ezimbalwa kuphela.
Ubukhulu Ground zamapulangwe
Ground zamapulangwe, usayizi, ububanzi nobude lapho empeleni iyokwaziwa, okokuvikela Ezansi isakhiwo kusukela izici zendawo ezimbi. Lokhu kwaziswa umelana umonakalo mechanical zingahanjiswa ukuba alingise izinto ezihlukahlukene, kuhlanganise zemvelo kanye yokufakelwa.
Le nkampani "Deck" inikeza ukudayiswa lolu hlobo sekugcineni. Vinyl zamapulangwe obuphelele kulokhu 1127 mm. Ngokuqondene nobubanzi, kuba elilingana 461 mm. Lezi Ubukhulu Site hhayi kuphela ukufakwa, kodwa futhi phakathi ezokuthutha. Lokhu zamapulangwe angathengwa belingisa itshe noma ezakhiweni zamatshe aqoshiwe. Leli qoqo basakaza phakathi abathengi ezifundeni eningizimu nasenyakatho. Iphaneli ububanzi 426 mm, kuyilapho ubude bayo kukhawulwe 1196 mm.
Ubukhulu ukuchema Novik
Kufanele sibe nesithakazelo ubude iphaneli zamapulangwe, uma uhlela ukuthenga Novik impahla ngaphansi kwale moto. Imikhiqizo eyenziwa nge-ubuchwepheshe ekhethekile, futhi ubukhulu babo kukhona 1150x520 mm. Ngaphambi kokufaka, kuyodingeka ukuba azitholele amaphrofayli wesitimela kokuqala namakhona zangaphandle. Lokhu sekugcineni has an ngentengo eqolo. Uma uthanda idwala, lokho akusho ibe impahla yemvelo, kuyoba eyanele yokuthenga ukulingiswa.
Ubukhulu esivamile zamapulangwe "Weinstein"
Ubude iphaneli zamapulangwe "Weinstein" abathengi ngokuvamile nesithakazelo. Lokhu sekugcineni libhekene eliphezulu. Esikhathini ukukhiqizwa panel usebenzisa ephezulu ukucacisa imishini isiJalimane, okuvumela ukuthola ekahle sekugcineni osayizi. olulodwa lwamapulangwe kulungiselelwa 795x595 mm. Ukusebenzisa le zamapulangwe, ungenawo agijime eningi Scrap. Indaba akanayo ukuthola inqolobane, kanye intengo yayo kuyokushiya umangele.
Kaningi, abathengi unqume ukuthi ukuthenga zamapulangwe - vinyl noma insimbi. I okufana yokugcina kuyinto esihlukile isisindo ongaphakeme, kuyilapho ngesikhathi steel base ilungele ukukhonza isikhathi eside. Uma ungafuni ukuba kulimaze ebusweni polymer, zamapulangwe metal kufanele usike ngokuqapha esiphezulu. Kangcono ke futhi angazange akwenze.
Ukuze ufunde indlela ukwandisa amandla nomthelela